အများယုံတာကို၊ယုံလိုက်တယ်။အဲဒါသတ္တိမရှိတာပဲ။မျက်ကန်းယုံကြည်မှုဟာ၊သတ္တိမရှိတဲ့လက္ခဏာပဲ။Conformity is cowardice.
ကြိုက်နေသွားတာမျိုးကို"courage to be oneself"လို.ပြောမယ်။အဲဒါလိုလူမျိုး၊အခုခေတ်မှာနဲနဲရှားပါးသွားပြီ။
Posted by မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် at 18:50
စိုးထက် - Soe Htet !2April 2008 at 20:44
အင်း ... လိုက်လျော ညီထွေလေး နေတတ် သွားတာပေါ့ :)
Anonymous2April 2008 at 23:21
myatnoe2April 2008 at 23:33
လူကြီးတွေ ပြောရင် နားထောင်လိုက် ပြန်မပြောနဲ့ ငရဲကြီးမှာ။ ပီးမှ လုပ်ချင်ရာလုပ်။ မှားရင်ခံလိုက်။ ကိုယ်က လုပ်လိုက်သူကိုး။ မှန်တော့လဲ ကိုယ်ပဲ ယူရမှာလေ။
လုပ်ရဲသူက ခံရဲဖို့တော့ လိုတယ်နော်။
ကြိုက်တယ်။ ဒီ ပို့စ်လေး။
မောင်အညတရ3April 2008 at 13:25